विविध Archives - Page 23 of 43 - Purbeli News
अर्जेन्टिनाको फ्यान हुँ भन्दै जर्सीमा लक्ष्मी आचार्यको पोज (भिडियो) Purbeli TV
नयाँ दिल्ली। भारतमा सुतिरहेको कुकुरमाथि कालोपत्रे गरिएको छ । भारतको उत्तर प्रदेश राज्यस्थित ताज महल नजिकै आगराको सडकमा सुतिरहेको कुकुरमाथि कालोपत्रे गरिएको हो । सुतिरहेको कुकुरमाथि सडक कालोपत्रे गरेपछि अहिले भाइरल बनिरहेको छ । कुकुरको आधा शरीरसमेत पिच गरिएको छ । सुतिरहेको कुकुरमाथि तातो अलकत्रा र रोडा खन्याएर सडकमा नै आधा शरीर पिच गरेपछि कुकुरक...
हिजोसम्म परिवारमा नयाँ सदस्य स्वागत गर्ने तयारी थियो अकस्मात परिवार नै सिकिने गरी घटना घट्यो । पोखारा १५ बस्ने रामजी घले र सुमित्रा ठकुरीको परिवारमा २÷४ दिन मै नयाँ सदस्य थपिदै थियो तर अहिले काखको ११ वर्षिय छोरोको पनि अस्पतालको पोष्टमार्टम कक्षामा शव लडिरहेको छ, जन्मिनै लागेको शिशुको गर्भ मै हत्या गरिएको छ, बाबा आमा बन्न तयार दम्बती मणिपाल र पश्चिम...
काठमाडौँ। केही दिन अघि चलचित्रकर्मी महिला सशक्तीकरण समिति तथा चलचित्र विकास बोर्डको आयोजनामा सम्पन्न अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण कार्यशाला कार्यक्रममा पुराना पुस्ताका कलाकार मिथिला शर्मादेखि अहिलेकी हट नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहसम्म सम्मानित भएका थिए । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रदेशसभा ३ की प्रमुख अनुराधा कोइर...
नेपालमा सदियौ देखि चलिआएका केही यस्ता लोपोन्मुख परम्परा छन् जुन निकै आश्चर्यजनक र जोखिमपूर्ण छन् । यस्तै एउटा परम्परा हिमालको काखमा रहेको लम्जुंग जिल्लाको तांजे गाउमा प्रचलित छ जसलाई “हाइ क्लिफ हानी हन्टिंग” अर्थात् “भिर मौरीको मह सिकार” भन्ने गरिन्छ । यो परम्परा करिब २०० वर्ष अघि बाउबाजेका पालादेखि सुरु हुँदै आएको भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । वरिपरि घन...
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनबीच ऐतिहासिक भेटघाट हुँदैछ । जुन १२ तारिखका दिन यी दुई नेताहरुबीच सिङ्गापुरमा हुने ऐतिहासिक मिटिङबाट निस्किने परिणामलाई अहिले विश्वका नेताहरुले पर्खिएर बसेका छन् । उत्तर कोरियालाई आणविक निशस्त्रीकरण गर्ने र आर्थिक रुपमा समृद्ध पार्न के कति गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यी दुई नेत...
कण्डम बिना बच्चा नबस्ने गरी कसरी गर्ने यौन सम्पर्क ? डा. नूतनले दिइन् यस्तो सल्लाह (भिडियो)
काठमाडौं । पछिल्लो समय जोखिम मोलेरै भएपनि गर्भपतन गराएको घटना बाहिर आउने गरेका छन् । विवाहित जोडीका हुन् वा अविवाहित जोडीहरुबीच असुरक्षित यौन सम्पर्कबाट बसेको गर्भ पतन गराउने गर्छन् । यसरी गर्भपतन गराउँदा महिलाको स्वास्थ्यमा असर गर्ने गर्छ । यस कारण गर्भ रहन नदिनु नै उत्तम हुने वरिष्ठ प्रसुती तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा नूतन शर्मा बताउँछन् । उनल...
ल्याण्ड गरेको भिडियो खिच्न खोज्दा रेकर्ड भयो दुर्घटना (भिडियोसहित)
नेपालगञ्जबाट जुम्लाका लागि उडेको तारा एयरको नियमित विमान आज ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको छ। जुम्ला विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा टायर पङ्चर हुँदा विमान अनियन्त्रित भई धावनमार्गबाट चिप्लिएर तारको जालीमा ठोक्किएको थियो। विमानमा सवार १८ यात्रु र चालकदलका तीन सदस्य सकुशल रहेको यति एयरलाइन्सका व्यवस्थापक भीमराज राईले जानकारी दिए। दुर्घटनामा विमानको अगाडिको भाग...
भक्तपुर। समिता नेपाली अर्घाखाँचीकि वासिन्दा थिईन्। घरबाट पढ्न जाने र घर फर्किने दिनचर्या थियो उनको। एकदिनको कुरा हो उनको गाउँमा महोत्सभको मेला लागेको थियो। उनी आफ्नो साथीहरुसँग महोत्सभ मेला घुम्न गएकी थिइन्। राजु अधिकारी नामक एक युवकले उनलाई ललाईफकाई गरी एक होटलमा लगे। खाजा खाएर घर जाउलिउ भनेर उनले लगेका थिए। खाजा खाने बेला जुसमा केहि मिलाएर राज...
विपिनाले खोलिन श्रीमान अपहरण भएको राज !
दश बर्ष अघि भारत यूपि स्थित मथुरा जिल्लाका एक धनाढ्य व्यवसायी एवं नेता आशुतोष भारद्धाजसंग विवाह बन्धनमा बाधिए पछि फिल्म नगरीबाट टाढा हुन पुगेकी हिरोइन विपना थापा यति खेर नेपाल आएकी छिन् । बेला बेलामा नेपाल आईराख्ने विपनासंग हामीले यो पटकको भेटमा विशेष अन्र्तवार्ता पनि लिएका छौ । सानैमा पिता गुमाएकी विपनाको विवाह मधुरामै भएको थियो जुन विवाहमा कन्याद...